Ihe ọkpụkpọ egwu maka gam akporo nwere ụda olu dị ukwuu | Gam akporosis
A music player maka gam akporo na oké ụda nhazi ụda
Na nyocha m na-eme kwa ụbọchị site na Playlọ Ahịa Google maka nkwanye nke ngwa kachasị mma maka njedebe gam akporo anyị, taa achọpụtawo m ihe ịtụnanya a music ọkpụkpọ maka gam akporo, nke nwere a ụda olu na ụda olu dị egwu Na nke, na mgbakwunye, anyị nwere ike larịị ụda na imeghari ya n'ụzọ zuru oke dị ka anyị mkpa, anyị nwekwara a imewe dịtụ iche na ndị ọzọ, a nnọọ yi imewe na phosphorescent agba nke na-eche nnọọ, nke ọma ka anyị gam akporo.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ a music player maka gam akporo na nnukwu nhazi ụda na a imewe nke ya eserese interface dị nnọọ iche na ndị ọzọ, mgbe ahụ ị na-nri ebe ebe ị ga-n'anya ndị music player na m ga-ewetara gị taa.
Iji malite, gwa gị na ọkpọ egwu egwu maka gam akporo na m ga-akwado gị taa, nke ahụ music player na oké nhazi ụda, anyị ga-enwe ike ibudata ya n'efu na Google Play Store, nke bụ ngwa ngwa ụlọ ahịa maka gam akporo, n'okpuru aha Amuzicg - zingtụ egwu egwu.
Dị n'okpuru usoro ndị a, na njedebe nke post ị ga-enwe ike ịchọta njikọ njikọ maka budata Amuzicg na Google Play.
1 Ma gịnị ka Amuzicg na-enye anyị n'ezie?
2 Budata Amuzicg n'efu na Playlọ Ahịa Google
Ma gịnị ka Amuzicg na-enye anyị n'ezie?
Amuzicg Na usoro nke onye ọrụ interface na-ekwu okwu, ọ bụ onye ọkpụkpọ egwu dị iche na ndị ọzọ, ma maka agba ya mara mma na ụda phosphorescent na agba na-enwu gbaa, yana ya akụkụ igodo ụzọ nke ga-ewega anyị n'akụkụ dị iche iche nke ngwa ahụ.
Nke a n'onwe ya bụ ezigbo arụmụka iji nwalee ngwa ahụ wee pụọ na monotony ndị ọzọ egwu egwu maka gam akporo na-enye anyị, ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe niile, ọ bụkwa na ọ na-eme ka anyị nwee obi ike ihe na-akpali akpali na-ejikọ ụda ise EQ na tọn ntọala ma ọ bụ ntọala nke ahụ ga-eme ka egwu dị na gam akporo anyị dị ka ọ dịtụbeghị mbụ.
E wezụga ụda dị mma nke nke a nyere pụrụ iche music player nke ya nnukwu mma bụ hotara na mbụ ụda nhazi ụda, ụda nhazi ụda a na-agbaso usoro agba nke ngwa nke egosipụtara ya na agba nha pọizọ, nke na-enye ya ihe dị iche na nke mbụ.
N'ime nhazi nhazi onwe ya, ewezuga ịchọta iri nsonaazụ ụda site Genres preset na-akpaghị akaAnyị ga-ahọrọ maka akwụkwọ ntuziaka iji họrọ ọnọdụ zuru oke dabara na ihe anyị chọrọ.
Dị ka a ga - asị na nke a ezughi, ọ nwekwara bọtịnụ atọ nwere otu ihe na - emepụta phosphorescent nke mbụ yana ihe dị iche na ihe anyị nwere ike ịhụ na ngwanrọ ndị ọzọ maka gam akporo, nke anyị ga - enwe ike ijikwa akụkụ dịka olu, BASS, ma obu gburugburu Virtualizer.
Budata Amuzicg n'efu na Playlọ Ahịa Google
Amuzicg - Igwe egwu & Redio
Developer: Amuzicg Dev
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » A music player maka gam akporo na oké ụda nhazi ụda
5-gbalaga EQ na nke ahụ dị ebube? Nke ahụ bụ ihe ngwa a na-enye nke kacha mma? O doro anya na ị maghị poweramp.
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, Edge + na Note 5 dị njikere ịnata Nougat n'ọnwa a
Samsung Galaxy S7 na S7 Edge tufuru ihe ruru 10% nke nnwere onwe mgbe ha na-emelite gam akporo 7.0 Nougat.